Soo dejisan Truecaller 6.01 – Vessoft
Soo dejisan Truecaller
Truecaller – software ah in la ogaado tirada maqan iyo xogta ee сaller ah. Truecaller xirta server lagu jiro, wac soo socda, ka Helayn tiro in database iyo bandhigayaa warbixin ku saabsan macmiilka. Software waxa uu isticmaalaa database furan lambarada telefoonka ka dalal badan oo phonebooks guud ee isticmaala go’aankaan soo saarka leh ee wicitaanada aan la garanayn. Truecaller Kuu ogolaaneysa inaad xakameyso wicitaanada aan la rabin, SMS khatar ah iyo lambarada view of dira emaillada maxalliga ah ama caalamiga ah ee uu ka database ee software-ka. Truecaller si toos Wararka xogta ah ee xiriirada ee software-ka iyo shabakadaha bulshada jecel yahay.
Baaritaanka wicitaanada qarsoon iyo xog-diruhu
Database badan oo taleefan lambarrada
Block soo wacay oo SMS
Jiritaanka liiska iyada oo tirada of dira emaillada aasaasiga ah
Truecaller Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Remote Mouse 2801
العربية, English, Français, Español... Avast 5.0.18
العربية, English, Українська, Français... Hola Launcher 2.0.5
Desktop Ayna System The software fudud iyo MFT in la beddelo interface iyo in la xoojiyo qalabka Android sida ay shakhsi ahaaneed.